Sendikan’ny Mpiandry fonja : Fanambarana mampiahiahy -
AccueilSongandinaSendikan’ny Mpiandry fonja : Fanambarana mampiahiahy
Sendikan’ny Mpiandry fonja : Fanambarana mampiahiahy
28/04/2017 admintriatra Songandina 0
Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny fanambarana nataon’ny Sendikan’ny Mpiandry fonja farany teo mitaky ny hampidirana an’i Claudine any Antanimora. Handray ohatra avy hatrany isika mba hisian’ny adihevitra matotra sy mipetraka manoloana izany fanambarana nataon’ny Sendikan’ny Mpiandry fonja izany.
Ny momba ny praiminisitra teo aloha Tantely Andrianarivo no ohatra voalohany hanokafana ny resaka. Fiampangana fito be izao no nanenjehan’ny fitondrana Ravalomanana Marc azy tamin’izany: fanodinkodinam-bolam-panjakana, fanohintohinana ny filaminana anatin’ny firenena, fisandohana andraikitra. Nanaraka akaiky niaro an’i Tantely Andrianarivo tamin’izany ny Amnesty international. Voatery nalefa notsaboina teny amin’ny HOMI ihany anefa ity praiminisitra teo aloha ity satria tsy vitan’ny “infirmerie”-n’Antanimora intsony ny niantoka ny fitsaboana azy, dia ireny niaraha-nahita ireny fa nandeha nitsabo tena tany ivelany ary tsy niverina teto intsony raha tsy ny taona 2010. Nitaky ny tokony hamerenana azy tany Antanimora ve ny Sendikan’ny Mpiandry fonja? Tsia, satria tsy andraikitry ny sendika natao hiady ho amin’ny tombontsoan’ny Mpiandry fonja izany fitakiana izany.
Faharoa, ny zava-nitranga ny volana Marsa 2009 tamin’ny fotoana nandosiran’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tany Swaziland. Navoaka an-keriny ireo gadra efa voaheloka, ireo tao Tsiafahy aza moa napetraka tao amin’ny Resto Gasy kanefa fanonganam-panjakana, famotehana tetezana sy fotodrafitrasa, halatra sy hosoka no heloka nanamelohan’ny Fitsarana azy ireo tamin’ny anaran’ny vahoaka malagasy, sns. Nitaky ny tokony hamerenana ireo gadra am-polony maro ireo ve ny Sendikan’ny Mpiandry fonja tamin’izany? Mbola tsia ihany koa ny valiny satria tsy andraikiny izany.
Ary farany sady goavana dia ny momba an-dRavalomanana Marc izay nomelohin’ny Fitsarana higadra mandra-pahafatiny. Moa ve mba nitaky ny hampidirana azy am-ponja ny Sendikan’ny Mpiandry fonja? Mbola tsia hatrany koa ny valiny satria tsy andraikitry ny sendika izany.
Mizana tsindrian’ila no fahitana izao fihetsiky ny Sendikan’ny Mpiandry fonja tamin’ity raharaha Claudine ity izao mihoatra amin’ny zava-nitranga notanisaina tetsy ambony. Milaza ve izany ny Mpiandry fonja fa voaara-maso ary mahazo fitsaboana araka ny tokony izy avokoa ny gadra rehetra ao Antanimora? Midika ve izany fa tsy tokony hisy gadra halefa hotsaboina any amin’ny hopitaly intsony satria mahafeno ny fepetra amin’ny resaka Fitsaboana ny “infirmerie” ao Antanimora? Mampiahiahy tokoa iny fanambarana nataon’ny Sendikan’ny Mpiandry fonja iny ka mahatonga ny fanontaniana hoe: “noho ny maha miliardera an’i Claudine ve ka mba mila ny anjarany koa ny Mpiandry fonja?”.